အောက်တိုဘာလ 2013 |2၏စာမျက်နှာ 37 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2013 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 2)
လစဉ်မော်ကွန်း: အောက်တိုဘာလ 2013
ဘယ်လိုအခမဲ့ Birds ဂိမ်း Reel FX မှာလေယာဉ်ရရှိခဲ့
Reel FX အမြဲဇာတ်လမ်းပြောပြအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြော်ငြာနှင့်ရေတိုပုံစံစီမံကိန်းများအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူ 1993 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီအစဉ်အဆက်ကတည်းက longform ဇာတ်လမ်းများဆီသို့တွန်းထားသည်။ အခုတော့ပထမဦးဆုံး Full-အရှည် Reel ၏ခါနီးလွှတ်ပေးရန်ဒီတနင်္ဂနွေ ... ပိုပြီး»အတူ
MAXON စီး Animation ရဲ့, VFX နှင့်ဂိမ်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့မှာရုပ်ရှင်ရုံ 4D Toolset တင်ဆက်ပေးတယ်
ရုပ်ရှင်ရုံ 3D, CINEWARE - နိုဝင်ဘာလ MAXON, ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 3D မော်ဒယ်, ပန်းချီ, ကာတွန်းနှင့် rendering ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏အစွမ်းထက် 4D software ကိုဖြေရှင်းချက်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်အနုပညာရှင်နှင့် developer များအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းမြောက်အမေရိကအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များမှာပါဝင်ပါလိမ့်မည်များ၏ဦးဆောင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၏လအတွင်းမှာတော့ နှင့် BodyPaint 3D - [ ... ] အံ့မခန်းပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့်အဘို့အလေးစားကြည်ညို
8th နှစ်ပတ်လည် HPA ဆုပေးပွဲတင်ဆက်မှုကြေညာ
ပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ကုန်သွယ်မှုအသင်းအဖွဲ့ - - Post ကိုအတွက် Gala ညနေပိုင်းဂုဏ်အသရေ Excellence (Los Angeles မြို့,, CA) ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (r) အတွက်ရရှိနိုင်သောလီမိတက်လက်မှတ်တွေဟာ HPA ဆုပေးပွဲလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းအဘို့တင်ပြတစ်ကြယ်စက်မှုလုပ်ငန်း lineup ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် [ ... ] နိုဝင်ဘာလပေါ်, Los Angeles မြို့,, CA အတွက် Skirball ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၌ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
လမ်းပြရုပ်ရှင်ရုံများ Los Angeles ကို "ဟုစိတ်ထဲသို့" World Tour များရရှိစေ
ကြံရာပါ Media က US မှာ repped ကနေဒါရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာမှနောက်ဆုံးရအင်္ဂါရပ်, ကိုလည်းတိုကျို, ပဲရစ်, မြူးနစ်မော်စကို, ဗီယင်နာနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအခြားမြို့များမျက်နှာပြင်မှစီစဉ်ထားသည်။ အဆိုပါစိတ်ထဲသို့ los Angeles-, အဆုံးစွန်သောတောင်ပေါ်ကိုတက်နှင့်နှင်းလျှောစီးဖို့အမည်မသိ skier ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. လမ်းပြရုပ်ရှင်ရုံသစ်ရုပ်ရှင်, [ ... ] ထဲမှာနှစ်ကြိမ်ပြပါလိမ့်မယ်
Crazy မှစ. လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်ဘာဘရာ Kopple: အအမွေအနှစ်ရဲ့ခဲအောက်ပါ
Hemingway တစ်အများအပြားရေတွက်အသင်းအဖွဲ့များသယ်ဆောင်အဆိုပါအမည်, "သဘောကျအောင်ဆက်ဆံ" နှင့် "ပါရမီရှင်" မနိမ့်ဆုံးသူတို့တွင်။ ဒါပေမယ့်ထွက်ရှာနေအတွင်းပိုင်းကနေတစ်ဝေးလျော့နည်း sensationalized အမြင်အာရုံသို့ slides ။ , သတ်သေ၏ ... - ကနေဒီမှတစ်ဦးကကျိန်စာသူမ၏ namesake Likening, သူမ၏နွယ်၏ Mariel Hemingway ရဲ့ဦးစားပေးဖော်ပြချက်အဖြစ်တက်ချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည် "ဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောကျိန်စာခဲ့ကြောင်းအခြားအမေရိကန်မိသားစု။ "
Blackmagic ဒီဇိုင်း4နည်းပညာ¢ "Thunderboltâနှင့်အတူ UltraStudio 2K ကြေညာ
Fremont, CA, USA သို့ - အောက်တိုဘာလ 31, 2013 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့စူပါအစာရှောင်ခြင်း Thunderbolt4နည်းပညာထည့်သွင်းရန် UltraStudio 2K, ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသောဗီဒီယိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခု model အသစ်ကြေညာခဲ့သည်။ အသစ် UltraStudio 4K ယခင်မော်ဒယ်အစားထိုးသာအမေရိကန် $ 995 များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Blackmagic ဒီဇိုင်းပြန်လည်ရောင်းချသူများအနေဖြင့်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ UltraStudio အနိုင်ရတဲ့အဆိုပါဆုချီးမြှင့် [ ... ]
အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်ခြင်းAcademy®ထုတ်လုပ်သူများ & အင်ဂျင်နီယာများWing®နှင့် 135th AES ကွန်ဗင်းရှင်းမှာ "ဒီရောသမ" ကျင်းပ Professional ကမှတ်တမ်းတင်န်ဆောင်မှုများ၏ဗြိတိန်ရဲ့အစည်းအရုံး
နယူးယောက်မြို့က The မှတ်တမ်းတင်Academy®ထုတ်လုပ်သူများ & အင်ဂျင်နီယာများWing®နှင့် Professional ကမှတ်တမ်းတင်န်ဆောင်မှုများ၏ဗြိတိန်ရဲ့အသင်း (APRS) အတွက် 30th AES ကွန်ဗင်းရှင်းနေစဉ်အတွင်းသောကြာနေ့တွင်, အောက်တိုဘာလ 2013, 18 - စန်တာမော်နီကာ, ကာလီဖိုးနီးယား (အောက်တိုဘာလ 2013, 135) ။ New York မှာအနောက် 27 စိန့်ပေါ် Jungle စီးတီးစတူဒီယိုမှာ "ဒီရောသမ" အမည်ရဖြစ်ရပ်တစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။ အဆိုပါ [ ... ]